BUKELA UBIRDMAN EXOLISA KULIL WAYNE ELIL WEEZYANA FEST 2018 - IINDABA
Bukela uBirdman exolisa kuLil Wayne eLil Weezyana Fest 2018
Ngokuhlwanje, u-Lil Weezyana Fest ka-Lil Wayne we-4 wonyaka uqhubeke eChampions Square eNew Orleans. Kulo nyaka, umnyhadala wosuku olunye ubhiyozele isikhumbuzo seminyaka elishumi UCarter III . Ngexesha lokusetha kwakhe ukukhanya, uWayne wagijima ngeendlela zonke UTha Carter iialbham. Ukwameme iindwendwe ezininzi ukuba zize eqongeni, kubandakanya uJeezy, uNicki Minaj, kunye noBirdman. UBirdman uthathe ithuba lokuqhekeza ngokusemthethweni yenkomo ixesha elide kunye noWayne. Bendifuna ukucela uxolo, utshilo. Jonga oko kwenzeka ngezantsi.
Ndikhutshiwe kwigumbi lokunyanzeliswa
drake iintaka ezimbini ilitye elinye mamela
U-Lil Wayne kunye no-Birdman bebesoyikisa esidlangalaleni kwi-and-off ukusukela ngoDisemba 2014 ejikeleze ukukhutshwa kukaWayne UTha Carter V . Ukuwa kwabo kubandakanya amatyala amaninzi, ukudubula, ukulandela umkhondo, ukwakheka okwethutyana, kunye nokuthatha umhlala-phantsi kuWayne. Kutshanje kusonjululwe amatyala amabini ekudala eqhuba uxele ukuba ukhulula uWayne ukuba ekugqibeleni akhulule ukulandela okudala kulindelwe ukuya kwi-2011's UCarter IV .
U-Lil Weezyana Fest ukwabonakalise nemidlalo evela ku-Tory Lanez, i-YoungBoy engazange iphinde yaqhekeza kwakhona, aba rappers base New Orleans njengo Fila Phil, nabanye abaninzi. NgoJuni, Chance the Rapper, Lil Uzi Vert, kwaye uzukile UCarter III 'Isikhumbuzo seminyaka eli-10 ngokubuyisela isiciko sayo sodumo.
Kwangoko kulo nyaka, uWayne ukhuphe i-mixtape entsha, Ukunikezela 6: Kulayishwe kwakhona . Uye watsibela nakuNicki Ukumkanikazi umkhondo Isini esityebileyo . Funda Indlela ende kaLil Wayne yoku UTha Carter V Pitch.
ikatala elungileyo yombane yabaqalayo
Ukujonga kwedrake kwi-6
iinkumbulo azisivuli isiciko secwecwe
aldous ukuqina umphanda
kodak omnyama omncinci ma
Owona mculo wevidiyo mhle
Inkqubo yezithethi zasekhaya zebluetooth